Burcad-badeeddii Somalida oo dib u soo laabanaysa waa maxay sababtu? | Puntland Today
Burcad-badeeddii Somalida oo dib u soo laabanaysa waa maxay sababtu?
Posted on February 17, 2017 by Dal Joog	Hobyo-(P-TODAY)-Qaar kamid ah kalluumaysatada Somalida ayaa la sheegayaa in ay hub- urursi bilaabeen,kadib markii Jariifka lagu hayo badda Somaliya uu gaaray heerkii ugu sarreeyay.
Dadka degaannada xeebta ah ee badweynta Hindiya ayaa soo sheegaya in ay arkeen qaar kamid ah kalluumaysatada Somalida oo hub uruursi bilaabay,iyagoo ku andacoonaya in ay dalka ka difaacayaan maraakiibta iyo doomaha jariifka ah ee waayadaan ku soo badanaya xeebta badweynta Hindiya ee Somaliya.
Mid kamid ah Kalluumaysatada ku sugan xeebta degmada Eyl ee Somaliya oo ka gaabsaday magaciisa iyo codkiisa ayaa PUNTLANDTODAY u sheegay in uu arkay dhalinyaro caraysan oo isku uruursanaya meel u dhow xeebta,kuwaasi oo ku hubaysan qoryaha AK47,wuxuuna xusay in ay diyaarsanayeen saxiimado iyo doomaha dheereeya oo ay doonayeen in ay ku weerar tagaan.
Sida uu sheegay ninkaani, dhalinyarada ayaa aad uga caraysnaa doomaha iyo maraakiibta Jariifka ah ee hubaysan oo burburiyey shabaago ay lahaayeen kalluumaysatada degaanka,iyadoo jariifka socdaana gaaray heer aan hore loo arag.
Meelaha dhaqdhaqaaqa awoodda badani ka socdo waxaa ka mid ah degmada Baargaal, nin hore u ahaa hoggaamiye Burcad-badeed oo magaciisa diiday ayaa yiri “Kama kalluumaysan karno wax ka badan 8 mile, awalna 15 mile ayaan tegi jirnay, jiriiflayaashu way na dilayaan qalabkana waa naga baabi’iyaan.”
Wuxuu intaas ku daray “Annagu hadii aan iska dhicin lahayn waxay nagu qaadan lahayd hal gelin, runtii hal gelin. Laakiin dowladii baa na oranaysa waa Burcad-badeed,” ayuu hadalkiisa ku soo afmeeray hawlgeliyahan hore.
Degaanno ka tirsan gobolka Mudug ayaa sidoo kale waxaa ka socda is-urursi kalluumaysatadii halkaasi ku sugnaa,kadib markii shabaagahoodii ay burburiyeen doomo iyo maraakiib jariif ah.
Qaar kamid ah kalluumaysatada xeebta degmada Hobyo oo codsaday inaan magacyadooda iyo codadkooda la baahin ayaa noo sheegay in ay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ay ku uruursanayaan hub iyo doomo ay kula dagaallamaan maraakiibta jariifka ah.
Dhanka kalena saraakiil hore uga mid ahaan jiray Burcad-badeedda Somalida oo markii dambe ku biiray ciidamada maamullada Puntland iyo Gal-Mudug ayaa la soo sheegayaa haatan in ay iska xaadiriyeen xeebaha badweynta Hindiya si ay shaqadooda u qabsadaan.
Xeebaha Somaliya gaar ahaanna badweynta Hindiya ayaa sannadahaan dambe waxaa ka jiray Jariif ba’an oo ay ku hayaan doomo laga leeyahay dalalka Khaliijka iyo Iraan,iyadoo ay u dheertahay maraakiibta waaweyn ee dalalka reer Galbeedka iyo waddamada Asia ee xaalufiyey,waxaana kalluumaysatada Somalidu marar badan ka cawdeen dhibaatada lagu hayo,inkastoo aanay jirin cid ka hoos qaadday hadalkooda.